आफ्नो पाखुरीमा ओलीको तस्बिर अंकित ट्याटु खोपाउने यी युवा को हुन् ? – Paluwa Khabar
माघ ५, २०७७ सोमबार 25
प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि चर्को रुपमा देखापरेको विवादले यतिबेला युवाहरुलाई पनि तितरबितर बनाएको छ । पछिल्लो समय आ–आफ्नो पक्षका नेताहरुको समर्थनमा विरोध गर्ने, अभियानहरु चलाउने कामहरु देखिएकै भएपनि वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तस्बिर अंकित ट्याटु एक युवाको पाखुरीमा देखिएको छ ।
नेकपाका ओली पक्षका नेता–कार्यकर्ताहरुले अहिले सो तसि्बरलाई सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्दै भाइरल बनाइरहेका छन् । ओलीको तस्बिर अंकति ट्याटु खोपाउने धादिङ जिल्ला धुनिवेशी नगरपालिका वडा नम्बर ९ स्थायी घर भएका युवा विक्रमजंग राना हुन् ।
काठमाडौँको कालीमाटीको ट्याटु सेन्टरमा गएर प्रधानमन्त्रीको तस्बीरको ट्याटु खोपेको उनको भनाई छ । रानाले प्रधानमन्त्रीमाथि भैरहेको चौतर्फी आक्रमण र घेराबन्दी विरूद्ध डटेर लड्न प्रधानमन्त्रीलाइ साहस प्राप्त होस भन्ने हेतुले आफूले ट्याटु खोपेको बताए । उनले विकासको मुल फुटाउने काम गरेका ओलीलाइ नै काम गर्न नदिएर अन्य नेताहरूले गम्भीर गल्ती गरेको बताए ।
Prevछोरीलाई मोबाइल किनिदिन चाहेको भन्दै ओमान मा रत्न कुमार ले गरे झु:ण्डि:एर आ:त्म ह:त्या !
Nextकु’ट’पि’टबाट वडाध्यक्ष ग’म्भी’र घा’इ’ते !
कर्णालीका मन्त्री शाहीको भिडियो का#ण्ड हेर्नूभयो? हेर्नुस पूरा भिडियो सहित
भर्खरै देउवा सरकारले गर्‍यो जनताको मन छुने अर्काे निर्णय, हेर्नुहोस् यस्तो छ निर्णय